Ịgụ akwụkwọ ọgụgụ mmụọ nke oge a > Isi ihe omimi nke omuma
Ntụle Isi Okpukpe Ọhụụ
Isi ihe omimi nwere, site na nke a, ọkachamara kachasị mma mụ na ya kwurịtara okwu. Ha bụ otu n'ime ndị kasị ochie, ọtụtụ ndị a na-akwanyere ùgwù maka ọrụ ahụike na azụmahịa. Onye ọbụla na-enweta ule na asambodo siri ike tupu Isi Iyi Na-enye Aka ka ha gụọ akwụkwọ. Ndị na-ahụ maka nlekọta uche ha nwere nnukwu ndepụta nke nlele anya site n'aka ndị ahịa nwere obi ụtọ, ọ bụghị ihe ijuanya. Ha na-enye ha ihe ziri ezi mgbe nile ma ọ dịtụghị mgbe ọ dị m ka enwere m ike ịtọ mpe. Ị na-akwụ ụgwọ tupu ị gụọ gị ka ị ghara inwe ebubo na-awụ akpata oyi n'ahụ. Akwukwo uche na Psychic bu ihe kwesiri nyocha. N'ime 25 afọ ole na ole gara aga, Isi Iyi Na-enye Onwe ya ọgụgụ mbụ site na ekwentị. Ugbu a, ha na-enye ekwentị, nzi ozi nkata na ozi-e. Isi Iyi Na-adịbeghị anya na-agbakwụnye ihe omume ederede ọhụrụ nke na-enye gị ohere ide ederede 1800 ma soro onye na-anọchite anya ndụ! Gwa ya, zitere 866-326-0193 ederede (ozi gị na-edekarị oge).
Azụmahịa ha nke ọma na-ewukwasị na ụkpụrụ abụọ dị mfe:
• Naanị ọrụ na ezigbo ndị ọkachamara nwere ọgụgụ isi bụ ndị na-ekwenye n'eziokwu ha.
• Na-emeso onye ọ bụla ahịa n'ụzọ ziri ezi na nkwanye ùgwù.
Ndị na-agụ akwụkwọ ọgụgụ isi ha bụ ihe ha kewapụrụ. Ha emeela usoro nyocha nke siri ike nke na-agụnye ajụjụ ọnụ na ule. Onye ọ bụla na-agụ anya ga - agụ akwụkwọ ga-enwerịrị ule nyocha ma kwadoro ya site n'aka otu n'ime ọgwụ ndị ahụ a nwapụtara. Okwu ochie a na-ekwu "Ọ na-achọ mmadụ ịmara otu" bụ eziokwu mgbe a bịara n'ịchọpụta ndị ọkachamara nke nkà mmụta uche nke nwere ike ịzọpụta akwụkwọ dị mkpa.
Isi ihe omimi nwere usoro nlezianya kachasị mma nke nlezianya nke ọ bụla n'ime ahụike m jirila. 1 siri ike site na 20 psychics nke na-etinye aka na Isi Iyi Ahụ na-enye ohere inye akwụkwọ na ọrụ ahụ. Usoro nyocha ahụ siri ike ma na-agụnye nlele anya, ọtụtụ nyochaa, ha ga-enyekwa onye na-agụ ihe ọmụma uche ugbu a na-anwale ikike ha. N'ihi usoro a, ị nwere ike ịme ka ọ bụrụ naanị ndị ọkachamara na-arụ ọrụ n'ebe ahụ.
Ebe E Si Nweta Ọrịa Ọrịa
Isi ihe omimi na-adịbeghị anya na-emelite ebe nrụọrụ weebụ ha ma amasị m ya. Ọ dị nnọọ mfe iji, ị nwere ike ịchọ aha psychics site na aha, ma ọ bụ ntinye ekwentị. Ọ bụrụ na ị maghị ụdị mmụma ịhọrọ ị nwere ike ịmepụta ndepụta ahụ site na ikike uche ha, ma hà dị ma ọ bụ na ha nwere ike iji oku, ọkwa ndị ahịa na ndị ọzọ. Isi ihe omimi na-enye ndi ahịa aka ka ha wepu ihe na ntule ka ha wee nwee ike ihu uzo ndi ozo choro ka ha guru.
Isi ihe omimi nwere onyinye pụrụ iche maka ndị ahịa ọhụrụ. Ndị ahịa ọhụrụ nwere ike nweta 10 nkeji maka nanị $ 10. Ị nwere ike ịzụta ruo minit 30 na ego a pụrụ iche. N'elu nke a, ndị ahịa ọhụrụ niile na-enweta ihe ọzọ 3 nkeji n'efu na ịzụta. Ihe niile Isi ihe omimi ndị otu a na-enweta kwa ụbọchị ezigara ha ozi n'efu. Ndị na-agụ kpakpando na ndị mmụọ ọjọọ na-ede ihe ha dere. Achọtara m na ha na-enye aka ma ugbu a, m na-atụ anya ha na email m kwa ụbọchị. Ekwadoro m ka ị debanye aha maka akwukwo ha. Akwụkwọ akụkọ ha nwere broktọ ego, na onyinye ndị ọzọ pụrụ iche nke naanị ndị na-edebanye aha na ala ga-enweta. N'afọ gara aga, ha nyere m ụfọdụ nnwere onwe na ụbọchị ọmụmụ m.
Ọrụ ndị ahịa bụ ebe Isi ihe omimi n'ezie ọ bụghị onye ọ bụla ọzọ. Isi mgbaka na-amalite site n'inye Nkwekọrịta 100%. Mgbagha ahụ na-ekwu ma ọ bụrụ na ị naghị enwe afọ ojuju maka onye na-agụ akwụkwọ ọgụgụ mmụọ gị, ma ọ bụ ịgụ ihe ha nyere gị na-akpọ ha ma ha ga-enye gị nkwụghachi zuru ezu ma ọ bụ nyere gị aka ịchọta onye na-agụ akwụkwọ ọgụgụ dị mma. Ha na-enye 24 awa awa na ụbọchị, 7 ụbọchị n'izu. Nkwado ndị ahịa ha dabeere na United States, achọpụtara m ha na ọ bụghị nanị na ha nwere nkwanye ùgwù ma dị mma ma ha na-eche banyere nsogbu ole na ole m nwere ma gbalịsie ike ime ka m nwee obi ụtọ. Ha makwaara nke ọma banyere ndị ọkachamara na-ahụ maka nkà mmụta sayensị na ọbụna tụrụ aro ụfọdụ ndị na-agụ akwụkwọ dị ukwuu iji gbalịa. Ọ bụrụ na nke a bụ mmalite nke ọgụgụ isi gị nke nwere ike ịchekwa gị oge dị ukwuu na-anwa ịhọrọ onye na-agụ ihe ziri ezi.
FREE CHAT **
Isi mgbaka na-agba ọsọ pụrụ iche maka ndị ahịa ọhụrụ, ị nwere ike nweta 10 nkeji maka naanị $ 10! Ị nwere ike ibudata na 30 nkeji na ọnụahịa a, yabụ mgbe ị debanyere aka jide n'aka na ị ga-enweta 30 nkeji ka ị nweta ihe kachasị maka ego gị. Na mgbakwunye na nke ahụ, ndị ọhụrụ ga-enweta kwa ụbọchị & ọnwa ntanye n'efu maka ndụ. Onye na-agụ kpakpando nwere ahụmahụ edere ihe ọ bụla horoscope, n'adịghị ka ndị ị hụrụ na akwụkwọ akụkọ ahụ. Ọ bụrụ na ị họrọ ịdebanye aha maka akwụkwọ akụkọ ha, ha ga-ezitere gị email na Kupọns na obere ego.
Gaa na Isi Iyi Aka